အသည်းကင်ဆာဝေဒနာခံစားနေရသော ဆယ်ကျော်သက်များ ခန္ဓါကိုယ် အပြောင်းအလဲတွေကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲ - Hello Sayarwon
အသည်းကင်ဆာဝေဒနာခံစားနေရသော ဆယ်ကျော်သက်များ ခန္ဓါကိုယ် အပြောင်းအလဲတွေကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲ
Dr . Phyu Mon Latt မှ ရေးသားသည်။ 12/05/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ကင်ဆာနဲ့ ကင်ဆာကုသမှုဟာ ကိုယ်ခန္ဓါ ပြောင်းလဲမှုတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီး အပျိုဖေါ်၊ လူပျိုဖေါ်ဝင်ချိန်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေအပေါ်ထားရှိထားတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေကိုလည်း ဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ပါတယ်။
ကင်ဆာကုသမှုပြီးချိန်မှာ ပြောင်းလဲမှုအချို့ဟာ ပျောက်သွားနိုင်သော်လည်း အချို့ကတော့ ပျောက်မသွားပါဘူး။ များသောအားဖြင့် ပျောက်မသွားနိုင်တဲ့ ပြောင်းလဲမှု (ဥပမာ အမာရွတ်ထင်ခြင်း) တွေဟာ အချိန်ကြာလာတာနဲ့ အမျှ သိသာထင်ရှားမှု နည်းပါးလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ကိုယ်ခန္ဓါ ပြောင်းလဲမှုတွေကို ထိန်းညှိဖို့နဲ့ စိတ်ညစ်နေရင် အကူအညီတောင်းခံနိုင်ဖို့ သင့်ကိုယ်သင် အချိန်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ကင်ဆာနဲ့ ကင်ဆာကုသမှုတွေဟာ သင်ခံစားနေရခြင်းတွေ၊ သင့်ပုံသဏ္ဍာန်တွေနဲ့ ပုံမှန်လုပ်နေကျ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ အချို့ကင်ဆာ ပြောင်းလဲမှုတွေဟာ ခဏတာ (သို့) တစ်သက်လုံးပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပေမယ့် ကုသမှုတွေအကုန်လုံးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သင်ကိုယ်ခန္ဓါ ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်နိုင်မှုတွေ ဖြစ်တဲ့ အားအင်၊ ခံနိုင်အား အစရှိတာတွေ ပြောင်းလဲသွားတာကိုလည်း ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ကင်ဆာနဲ့ ကင်ဆာကုသမှုဟာ ဆယ်ကျော်သက်တစ်ယောက်အဖြစ် ကိုယ်ခန္ဓါ ပြောင်းလဲမှုတွေကိုလည်း အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ သင့်ကိုယ်ခန္ဓါဟာ ပုံမှန်ကြီးထွားလာခြင်းရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲလာပါတယ်။ ဘယ်လိုပြောင်းလဲမှုတွေဟာ ပုံမှန်ဖြစ်ပြီး ဘယ်လိုပြောင်းလဲမှုတွေကတော့ ကင်ဆာနဲ့ ကင်ဆာကုသမှုတွေ ကြောင့်လဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ခြင်းဟာ စိတ်ရှုပ်စရာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ဖေါ်ပြပါ အချက်တွေကတော့ ကင်ဆာကုသမှုကြောင့် လူပျိုဖေါ်ဝင်ချိန်မှာ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကင်ဆာနဲ့ ကင်ဆာကုသမှုဟာ သင့်ကြီးထွားမှုကို အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိပြီး နှေးကွေးစေပါတယ်။
ငယ်ရွယ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ရာသီစတင်လာဖို့ နှောင့်နှေးနိုင်ပါတယ်။
သင့်ကိုယ်ခန္ဓါ ပြောင်းလဲမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းတွေ ရှိရင် ဆရာဝန် (သို့) ဆရာမကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
ကင်ဆာကုသမှု အမျိုးအစားတိုင်းဟာ ဆိုးကျိုးတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ သင်ခံစားနေရတဲ့ဆိုးကျိုးတွေဟာ အခြားသူတွေ ခံစားနေရတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေနဲ့ ကွာခြားမှု ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဆိုးကျိုးတွေဟာ ကုသမှု အမျိုးအစား၊ ဆေးပမာဏနဲ့ သင့်ကိုယ်ခန္ဓါ ကုသမှုပေါ်မူတည်ပြီး ဘယ်လောက်ခံနိုင်သလဲဆိုတာပေါ် မူတည်ပါတယ်။ အောက်ဖေါ်ပြပါ ဆိုးကျိုးတွေကတော့ ကင်ဆာနဲ့ ကင်ဆာကုသမှုကြောင့် အဖြစ်များတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်မှုကြောင့် အမာရွတ်ထင်ခြင်း (သို့) ကိုယ်ခန္ဓါ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဆုံးရှုံးခြင်း
ဓါတ်ရောင်ခြည်ဖြင့် ကုသခြင်း (သို့) ကင်ဆာဆေးသွင်းကုသခြင်းကြောင့် ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း
ကင်ဆာနဲ့ ကင်ဆာကုသမှုကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်တက်ခြင်း (သို့) ကျဆင်းခြင်း
ကင်ဆာနဲ့ ကင်ဆာကုသမှုကြောင့် နာကျင်ခြင်း
ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ ဖျားခြင်း
သင့်မှာ ဒီဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ရှက်စရာကောင်းတယ်လို့ ထင်ရင်တောင် မိဘတွေ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူတွေကို ပြောပြသင့်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူတွေက လက္ခဏာ အတော်များများကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကို ကုသခြင်းဟာ ကင်ဆာနဲ့ ကင်ဆာကုသမှုရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကင်ဆာကုသစဉ်မှာ ဝေဒနာ ခံစားရမယ်လို့ မတွေးပါနဲ့။
အမြင်၊အတွေးတွေ ပြောင်းလဲခြင်းကို ထိန်းချုပ်ခြင်း
မြင်နေရတဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်တဲ့ အရေပြားပြဿနာများ (သို့) ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းတွေဟာ သင့်ကိုယ်သင် ပိုမိုသတိထား မိစေနိုင်ပါတယ်။ မမြင်နိုင်တဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်တဲ့ ပင်ပန်းခြင်း (သို့) ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့ အမာရွတ်တွေကတောင် သင့်ကိုယ်သင် ပြောင်းလဲမှုကို ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သင်အများစုဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတိထားမိမှု အလွန်များပြီး ဒါဟာ ပုံမှန်သာ ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုသိထားသင့်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေက သင့်ပုံပန်း (သို့) အတွေးအေခါ်ပြောင်းလဲခြင်းတွေကို ကူညီပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ပုံပန်းသဏ္ဍာန်အသစ်နဲ့ နေသားကျအောင် အချိန်ပေးပြီး ကိုယ်ခန္ဓါကို ထိန်းညှိပါ။
ကိုယ်ခန္ဓါ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်တဲ့ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်တက်လာခြင်းတွေဟာ ခဏတာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမြဲပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်တဲ့ အမာရွတ်ထင်ကျန်ခြင်းတွေဟာလည်း အချိန်ကြာလာတာနဲ့ အမျှ သိသာထင်ရှားမှု နည်းပါးလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ကိုယ်ခန္ဓါ ပြောင်းလဲမှုတွေကို ဘယ်လို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းလဲဆိုတာသိနိုင်ဖို့ အခြား ကင်ဆာရှိတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်တွေနဲ့ စကားပြောနိုင်ပါတယ်။
သင့်ပုံပန်းသဏ္ဍာန်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းတွေ၊ ကောက်ချက်တွေကို ပြင်ဆင်ထားပါ။ လူတွေကို ဘယ်လောက်ပြောပြချင်ပြီး မေးခွန်းတွေကို ဘယ်လိုဖြေမယ်ဆိုတာကို ပြင်ဆင်ထားပါ။ တကယ်လို့ ဒီအကြောင်းကို မပြောပြချင်ဘူးဆိုရင်တော့ သင့်သူငယ်ချင်းကို ဒါဟာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဖြစ်တယ်လို့သာ ပြောလိုက်ပါ။
သင့်ကိုယ်ခန္ဓါဟာ ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ရော ခံစားမှုအားဖြင့်ပါ ပြောင်းလဲနေပေမယ့် သင်ဟာ သင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ အရည်အသွေးတွေကိုတော့ ကင်ဆာက ပြောင်းလဲမှု မပြုလုပ်နိုင်ပါဘူး။
ကလေးရခြင်းနဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး
အချို့ကုသမှုတွေဟာ နောက်ပိုင်းမှာ သင့်ရဲ့ ကလေးရရှိနိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်အတော်များများက မိဘ ဘဝကို နောက်ပိုင်းမှ သက်ဆိုင်တဲ့အရာ၊ ခုတော့ အရေးမကြီးသေးပါဘူးဟု တွေးကောင်းတွေးနေမှာဖြစ်ပေမယ့် သင့်ဆရာဝန်နဲ့ ကလေးရရှိမှုရဲ့ မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးအကြောင်းကို ကုသမှု မစတင်မီ ကတည်းက ကြိုဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။ အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးရောပါ ကလေးရရှိမှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပြီး ဒါကို မျိုးဆက်ပွားနိုင်စွမ်းကို ထိန်းသိမ်းခြင်း လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းတွေ အောင်မြင်ဖို့အတွက် ကုသမှု မစတင်မီ သေချာစွာ စဉ်းစားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ကင်ဆာဆေးကုမှု ခံယူနေစဉ်မှာ ကိုယ်ဝန်မရှိအောင် (သို့) အကာအကွယ်မဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှု မပြုမိအောင် ဂရုစိုက်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သင်ဟာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ တက်ကြွသူ ဆိုရင်တော့ သင်နဲ့ သင့်လိင်ဆက်ဆံဖက်ကို လုံခြုံစိတ်ချရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကို ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။ ဥပမာ သင့်လိင်ဆက်ဆံဖက်ကို ကင်ဆာဆေးသွင်းကုသနေစဉ် လိင်ဆက်ဆံမှုအတွက် ကွန်ဒုံးအသုံးပြုဖို့ လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။
ကင်ဆာကုသမှု ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာတွေကို မျှော်လင့်ရမယ်ဆိုတာကို ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေ အတွက်ဆိုရင်တော့ ဆွေးနွေးမှုမှာ ရာသီဘယ်တော့ ပြန်လာမလဲဆိုတာမျိုး ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်ဟာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ တက်ကြွသူဆိုရင် ပြန်စတင်ဖို့ အဆင်ပြေပြီလားဆိုတာ မေးမြန်သင့်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ သင် (သို့) သင့်မိဘတွေဟာ သင့်ကင်ဆာကုသမှုနဲ့ မျိုးဆက်ပွားနိုင်စွမ်း ထိန်းသိမ်းခြင်း နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို နောက်ဆရာဝန်တွေအတွက် သိမ်းထားပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ကလေးရရှိခြင်းနဲ့ မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့အချက်တွေကို ပိုမိုလေ့လာသင့်ပါတယ်။
Translated by Phyu mon latt
Cancer center. kidshealth.org/teen/cancer_center/index.html?tracking=80016_C#cat20671. Accessed 26/07/2015.
Coping with changes to your body. http://www.cancer.net/navigating-cancer-care/teens/coping-changes-your-body. Accessed 26/07/2015.